Native Mogok: Woking in Mogok
Woking in Mogok
မိုးကုတ်မြို့မှာအများစုသိကြသလောက်တော့ ကျောက်တွင်းတွေကနေ ကျောက်တွေ ထွက်တယ်ပေါ့။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီအလှဆင်ဖို့သက်သက် အသုံးဝင်တဲ့ ကျောက် လေးတွေဟာ မိုးကုတ်သူ မိုးကုတ်သား တွေရဲ့ အသက်၊ သွေး၊ ချွေး အကုန်လုံး ပါတယ်။ ဒီကျောက်ကိုရဖို့ တစ်ချို့လူတွေ အသက်နဲ့ရင်းရတယ်၊ တစ်ချို့ချွေးနဲ့ သွေးနဲ့ ရင်းကြရတယ်။ ကျောက်ရဖို့ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ အားကုတ်ထုတ်စိုက်ရတယ်။ “သေရင် မြေကြီး၊ ရှင်ရင်ရွှေထီး” ဆိုတာ မိုးကုတ်ကကျောက်တူးတဲ့လူတွေကိုများပြော သလား လို့ တစ်ခါတစ်လေလည်း တွေးတော့တွေးမိပါတယ်။ ယင်ကောင်လေးတွေ မှန်ပြတင်းပေါက်ကို ထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးကိုပေါ့။ မိရိုးဖလာအသက်မွေးမှု လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်၊ ကံကောင်းရင် အမြတ်အစွန်းလည်းများများရတာမို့ လောဘ ဇောလေးကပ်ပြီး လုပ်ကြရတာပါဗျာ။
မိုးကုတ်မြို့မှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျောက်မျက်တွေကတော့ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ဥသာဖယား၊ နီလာဖြူ၊ ထတ္တရာ၊ ဂေါ်မိတ်၊ ကြောင်၊ မှန်မီးပေါက်၊ စလင်း များအပြင် အခြား ကျောက်အမျိုးအစား (၃၀)ကျော်ခန့်ထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီကျောက်တွေက အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်တော့ မြေကြီးထဲမှာရှိတယ် လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမြေကြီး ထဲက သက်တမ်းရင့် ပျက်ပြုန်းမြေဆီလွှာဖြစ်တဲ့ (ဗြုံး)မြေလွှာထဲမှာရှိပါတယ်။ ဗြုံး ဟာဆိုရင် အလွှာ(၂)လွှာရှိပါတယ်။ မြေပြင်ကနေ ပေ(၁၀၀)အတွင်းရှိတဲ့ ဗြုံးလွှာကို ခါးဗြုံး၊ ပေ(၁၀၀)နဲ့အောက်မှာ ထပ်တွေ့တဲ့ ဗြုံးလွှာကတော့ အောက်ဗြုံးတို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဒီဗြုံးမြေလွှာတွေအပြင် သက်တမ်းရင့် စကျင်ကျောက်ခဲတွေထဲကလည်း ကျောက်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်တွင်းလို့ခြုံပြီး ခေါ်ပေမယ့် နည်း(5)နည်းနဲ့ ကျောက်ကို ရှာကြပါတယ် -
(၄) ခဲတွင်း (ဂဲတွင်း)
(၅) လူးတွင်း (လှိုင်ဂူတွင်း)
(၁) လေးပေတွင်း။ လေးပေပါတ်လည် တွင်းတူးပြီး အောက်တည့်တည့်ကို ထိုး ဖောက်သွားရတယ်။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် အိမ်သာတွင်းတူးသလိုပေါ့ ဟဲဟဲ။ တူးလို့ပေ(၂၀)ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ ပါတ်ပါတ်လည်နံရံ တွေကို တိုင်တွေခံ သစ်တွေနဲ့ အခိုင်အမာလုပ်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီထက်နက်နေလို့မှောင်သွားရင် ဖယောင်းတိုင် တွေနဲ့ဆက်လုပ်ကြရတယ်။ တစ်ချို့က ဘက်ထ္တရီမီး၊ ဓါတ်မီးတွေနဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒီထက် နက်လာပြီဆိုရင် စက်သီးတွေဆင်ရပြီး တူးပြီးသာမြေတွေကို အပေါ်တင်ဖို့ပါ၊ အဲဒါအပြင် ရေတွေထွက်လာလို့ ခပ်ထုတ်ရတယ်။ မိုးရွာပြီဆိုသေရောပဲ။ တွင်းဆို ခဏခဏရေမြုပ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီထက်ဆိုးတာက ဘာလဲဆိုတော့ လေပြတ်တာပဲ။ လေပြတ်သွားရင် သိသာပါတယ်။ ထွန်းထားတဲ့ဖယောင်းတိုင်မီးငြိမ်း သွားတော့ တာပါပဲဗျာ။ အောက်စီဂျင်မှမရှိတော့တာကိုး။ ဒါဆိုရင်တော့ အပေါ်ကို အသဲအသန် ပြေးတက်ပေတော့။ အဲ့ဒီလိုလေပြတ်တဲ့ပြသာနာကို အပေါ်ကလူက ဖားဖိုလေးနဲ့ ခြေနင်းလေးလုပ်ထားတယ်၊ ပြီးရင် လေပိုက်ချထားပေးတယ်။ ဒါဆိုအောက်ထဲမှာ လေရသွားပြီလေ။ နည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့လူကြတော့ မော်တာလေးနဲ့ လေစက် ကိုတွဲထားလိုက်တယ်။ မီးအတွက်လည်း မီးစက်မောင်းထားပေးတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ဘာအခက်အခဲရှိသေးလဲဆိုတော့ တူးနေတဲ့ အောက်က ကျောက်ခဲအကြီးကြီး တွေခံနေပြန်ရော။ ရှိတာမှ လေးပေပါတ်လည် ဘယ်လိုလုပ်အပေါ်တင်လို့ ရမလဲ။ ဒါကြောင့် စို့(သံချောင်းလုံး)တွေနဲ့ အဲ့ဒီကျောက်ကိုထွင်းပြီး ယမ်းထည့်ပြီးဝါယာ ကြိုးနဲ့ချိတ်၊ အပေါ်အကုန်တက်ပြီး ယမ်းခွဲကြရတယ်။ တစ်လုံးနဲ့မရရင် သုံးလေးလုံးလောက် တစ်ဆက်တည်းခွဲရတယ်။ ပြီးမှ ယမ်းငွေတွေကို လေနဲ့ မှုတ် ထုတ်ပြီးရင် ဂဲတွေအရမ်းကြီးရင် တူနဲ့ထုခွဲပြီး အပေါ်ကိုစက်သီးနဲ့ တင်ကြရတယ်။
ကဲဗြုံးလွှာရောက်လို့ ဗြုံးတွေ့ ကြပြီဆိုရင် တွင်းရဲ့ပါတ်လည်ကို ချဲ့လိုက်တယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဒီအခါမှာ ဒေါင်လိုက်လှိုက်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမိုးတွေ၊ ကြမ်းပြင်တွေကို သစ်၊၀ါးတွေနဲ့ ခိုင်ခံ့အောင် ထောက်ခံထားရတယ်။ ပေ(၂၀) (၃၀) လောက်တော့ အများအားဖြင့် လှိုက်တူးကြတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်တော့ဆက်ပြီးတူးတာ သိပ်မတွေ့ ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြိုကျမှာကြောက်လို့ပေါ့။ ဒီလောက် သစ်တွေ၊ ၀ါးတွေနဲ့ ထောက်ထားတာတောင် ပြိုကျတယ်။ မြေဖိအား တစ်အား များလာလို့ တွင်းတွေ ပိညှပ်သွားတယ်။ အပေါ်တင်တဲ့ ခဲလုံး(ဂဲလုံး)တွေ စက်သီးပေါ်ကပြုတ်ကျတယ်။ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ အမျိုးမျိုးသေကြရပါတယ်။
ဆက်ပြီး ပြောပါ့မယ် ဗြုံးမြေလွှာတွေရပြီဆိုရင် အပေါ်ကို စက်သီးနဲ့တင် လိုသ လောက်အကုန်ရပြီ ဆိုရင်တော့ ဗြုံးမြေကြီးကိုဆေးကြပါတယ်။ ဆေးတဲ့ နည်းမှာလည်း (၃)နည်းရှိတယ်။ ရေခွက်လို ဇကာပါတ်ပါတ်လည်နဲ့ ခွက်ကြီးထဲ ကိုထည့်ပြီး အားပြင်းတဲ့ နော်ဇယ်ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးဆေးကြတယ် မြေတွေကုန် သွားရင် ကျန်တာကတော့ ဂဲတွေအပါအ၀င် ကျောက်တွေပေါ့။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ဂဲအကြီးတွေကိုရွှေးထုတ်ပြီး ကျန်တာကို ဇကာအ၀ိုင်းလေးထဲထည့်ပြီး လှည့်ဆေး ရပါတယ်။ ကျောက်က ပုံမှန်ဂဲတွေထွက် အလေးချိန်ပိုစီးတာမို့ ရေထဲမှာ ဇကာကို လှည့်လိုက်တဲ့အခါ အလည်ခေါင်မှာလာစုပါတယ်။ အေးဆေးယူလိုက်ယုံ ဟဲဟဲ ပါရင်ပြောတာပေါ့လေ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ရေကန်တစ်ခုနဲ့ မြောင်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ မြောင်းရဲ့ အစွန်မှာ ဇလုတ်လေး(ရေခွက်အား မြေကြီးတွင်မြုတ်ထားသကဲ့သို့) လုပ်ထား ရပါတယ်။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဆေးတံလိုမျိုးပေါ့။ ရေကန်ထဲမှာ ဗြုံးတွေကိုထည့် ပြီးတော့ ရေဆေးချလိုက်တယ် ရေထွက်မြောင်းကနေ ရေတွေဂဲတွေအကုန်လုံး ပါသွားတာပေါ့။ ကျောက်တွေဆိုတာလေးတယ်လေ ဒါကြောင့် ဇလုတ်ထဲ ရောက်တဲ့ အခါမှာ ကျောက်တွေက ပြန်မထွက်နိုင်ပဲ မြေကြီးနဲ့ ပေါ့တဲ့အရာတွေသာ ပြန်ထွက် သွားတယ် ကျောက်တွေကကျန်ခဲ့တာပေါ့။ အဲ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ကျောက်တွေကို ၀ိုင်းဇကာနဲ့ ဆေးချလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ လှည့်လိုက်ရင်အလည်မှာ လာစုတယ်။ ကဲ ကျောက်ရပြီဗျာ မိန်းမယူမယ်၊ ပါကျဲရိုးကားဝယ်မယ်၊ တိုက်ဆောက်မယ်၊ ဟမ်းဖုန်းခါးကြားထိုးပြီး ဒိုဝယ်စီးမယ်။
(၂) အင်းဗြဲ။ ဒါကလည်း အထူးအဆန်းကြီးမဟုတ်လှပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ သူဌေးလုပ်ငန်းကြီး ပေါ့ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စက်ကိရိယာ အင်အား၊ လူအင်အား၊ ငွေအင်အား၊ အများကြီးသုံးပြီး လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ဒယ်အိုးကြီး တစ်လုံးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အင်းဗြဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ တူးချင်တဲ့နေရာက မြေကြီး တွေကို စက်ကြီးတွေနဲ့တူးပြီးဘေးကိုတင်တယ် ကြာလာတော့ ရေအင်းကြီး ဖြစ်သွားရောဗျာ။ ဗြုံးလွှာကိုမရောက်မချင်းတူးတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် တော်တော် ကြီးကိုနက်ကြတယ်။ ဗြုံးလွှာကိုတွေ့တော့လဲ တစ်ကြောလုံး တူးတင်ပြီး ဗြုံးဆေးတော့တာပေါ့ ရတာလည်းများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သာဆိုရင် ကတော့အဲ့ဒီ အင်းဗြဲမလုပ်ဘူး။ အကုန်အကျအရမ်းများတယ် ငွေတွေကို မြေကြီးထဲတူးပြီးမြုပ်နေသလိုပဲ။ ကံကိုအဲ့ဒီလောက်မယုံဘူး။
မိုးကုတ်မြို့ အ၀င်က အင်းဗြဲကျောက်လုပ်ကွက်ပါ
(၃) မျောတွင်း။ ဒါကတော့ တောင်ကမ်းပါးရံ တွေကို ရေနဲ့တိုက်ချတယ် အောက်မှာရေသွားမြောင်းအကြီးကြီးတွေ လုပ်ထားကြတယ်။ အဲ့ဒီမြောင်း အကြီးကြီးတွေက ဗြုံးဆေးတဲ့ ရေကန်(ရေမှုံကန်) တွေဆိုကို ဆက်ထားတယ် အဲ့ဒီတော့မရှင်းဘူးလား ဗြုံးလွှာထဲကကျောက်ပါပါ၊ ရိုးရိုးမြေကြီးထဲကပါပါ အကုန်ရတယ်ရှင်းရော။ သူကတော့ ငွေအင်အားသုံးရတာ သိပ်မများပါဘူး။
မိုးကုတ်မြို့၊ ကျောက်ပြသာဒ်ရွာက ယခင် နီလာကျောက်များ အချောင်းလိုက်ထွက်ရှိပြီး မြင်းများနှင့်ပင်တိုက်ယူရသည်ဆိုသော ထင်ရှားသည့် (သူရိန်တောင်) မျောတွင်းကြီး
(၄) ဂဲတွင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆမိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သိထားကြတာ မြေကြီးထဲက ကျောက်ထွက် တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စကျင်ကျောက်သားတွေထဲမှာ သက်တမ်းရင့် အရည် အသွေးလှလှနဲ့ ကျောက်တွေအများကြီး တွေ့နိုင်တယ်ဆို ယုံနိုင်မလားဗျာ။ ၁၉၉၆ခုနှစ် လောက်မှာ ဟိုနားတစ်စ ဒီနားတစ်စနဲ့ စကျင်လိုကျောက်ခဲ ထဲကနေပြီးတော့ ကျောက်တွေစတွေ့လာကြပါပြီ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ စကျင်ဂဲသား(အကြည်) တွေကို ရှာဖွေပြီး ထုခွဲကြတော့ တယ်။ ဒါမှလည်း အထဲကကျောက်ရှိရင်တွေ့မှာကိုး ၁၉၉၉ လောက်မှာ ဂဲကျောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိအောင် ခောတ်စားသလဲဆိုရင် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းရဲ့ မြေသားကြမ်းပြင်တွေမှာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ စကျင်ဂဲအမှုန်များ ခင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ယခုမိုးကုတ်မြို့ကိုရောက်မယ်ဆိုလဲ အဲ့ဒီအချိန်လောက်က လက်ရာတွေမြင်တွေ့ရဦးမှာပါဗျာ။ အောက်ပုံပါသလိုမျိုးပေါ့ -
နောက်ပိုင်း စကျင်တောင်ကြီးများကို မျက်စပစ်လာကြပါပြီ ကျောက်မျက် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေဟာ ကျောက်ဂဲတွင်းတွေကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်မှာပဲ စတင်ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။ ငွေအား၊ လူအားနဲ့ လုပ်ကိုင်ကြတာမို့ တစ်ချို့ကျောက်တောင် ကြီးတွေဆို (၆)လလောက်နဲ့ မြေမှုန့်ဖြူဖြူတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့အထိပါပဲဗျာ။ အောက်ကပုံကတော့ ဖက်စပ်လုပ်ကွက်များမှာ စကျင်ဂဲကျောက်များအတွင်းက အဖိုးတန်ကျောက်များကို ရှာဖွေနေပုံပါ -
အောက်မှာပါသလို အနေအထားမျိုးနဲ့ ကျောက်နီ(ပတ္တမြား)များကို တွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်။ ဂဲတွင်းမှ ထွက်ရှိသော ကျောက်များမှာ မြေတွင်းမှ ထွက်ရှိသော ကျောက်များထက် အများသောအားဖြင့် အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန် တာကို ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ် -
ခဲတွင်း(ဂဲတွင်း)ထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ကျောက်ပြသာဒ်ဘုရားတောင် ပါပဲ(ကန်တော့ ကန်တော့ ဘုရား) ပြစ်မှားသလိုများဖြစ်နေရင်။ ကျောက်သား အတော်များများထဲမှာကို အဖိုးတန်ကျောက်တွေ ငေါလော ထွက်ပြီး မြင်နေရလို့ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က အင်္ဂတေနဲ့လိုက်ပြီး ပိတ်ထားရတဲ့အထိပါပဲ။ အောက်ပုံပါ -
(၅) လူးတွင်း (လှိုင်ဂူတွင်း)။ လှိုင်ဂူတွင်းဆိုတော့ နားလည်ဖို့လွယ်တာ ပေါ့ဗျာသဘာဝကျောက်လှိုင်ဂူကြီး တွေထဲကိုဝင် ပြီးတော့ မီးလေးထွန်းသွား ပြီးလို့အနက်ထဲရောက်ပြီဆိုရင် တွေ့တဲ့မြေကြီးကဗြုံးပဲဗျာ အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး ကောက်ထမ်းလာခဲ့ အပြင်ရောက်မှဆေးလိုက် ပြီးပြီ တစ်ချို့လှိုင်ဂူတွေဆိုရင် လှိုင်ခေါင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ လမ်းကို သင်္ဘောဆေးနဲ့မှတ်သွား ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အပြန်လမ်းမမှတ်မိနိုင်ပါဘူး။ ပြန်လမ်းမရှိပေါ့။ အထင်ရှားဆုံးသော လှိုင်ဂူဆိုရင်တော့ အလံတစ်ရာလူး ပါပဲ။ မျက်စိ တစ်ဆုံးနက်ပြီးအခုအချိန်အထိ လှိုင်ဘယ်နှစ်ပေါက်ရှိလဲ။ လမ်းဘယ်အထိ ပေါက်သလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ပြောနိုင်သူမရှိသေးပါဘူး။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Aung Chan Lin at 3:27 PM
Thanks for sharing ur knowledge abt ur town (ruby land). bravo! bro :)
April 1, 2007 at 11:41 PM
ကျောက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ.. ငွေအားလူအားဘယ်လောက်တောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတယ်ဆိုတာကို အနည်းအကျဉ်းတော့သိသွားကြတာပေါ့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
April 24, 2007 at 1:28 AM
မိုးကုတ်သားဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် ဒီလောက်စုံစုံလင်လငိ မသိဘူးဗျာ .။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
facebook မှာ အားလုံး ဗဟုသုတ ၇သွားအောင် share ချင်ပါတယ် ။ကူညီပါဦးဗျာ။
The VANQUISGER said...
၁။ “လေးပေ တွင်း” လို့ရေးထားတာကို “လေးပင်တွင်း” လို့ပြင်စေချင်ပါတယ်။ လေးဖက်လေးတန် “ထုပ်တန်း” နဲ့ ဘောင်ခတ်တာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
၂။ “ကိုးပင်တွင်း” ရှိပါသေးတယ်။ လေးပင်တွင်းအလျားကျယ်ကျယ်ကို မြေမပြှိုအောင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ထောင့်တွေမှာ တချက်စီထောင့်ဖြတ် ဘောင်အတိုလေးတွေခတ်ပေးလိုက်လို့ ရှစ်ထောင့်ပုံဖြစ်သွာပြီး အလျားကျယ်လှတဲ့တွင်းကြီးကို မြေကန်အားကောင်းအောင် အလယ်ကနေ ထုပ်တန်းတတန်းနဲ့ထပ်ဆင့် ကျားကန်ပေးတာမို့ ထုပ်တန်း ၉ ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလို ၉ ပင်တွင်းကို စက်သီး နှစ်လုံးနဲ့ မြေစာ/ ဗြှုန်းတင်ယူပါတယ်။ အလုပ်နှစ်ဆ လုပ်တဲ့သဘောပါ။
၃။ “တွင်းလုံး” ကျောက်တွင်းအကြောင်းရေးရင် အခြေခံအကျဆုံး “တွင်းလုံး” ကို ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ အခုခေတ်မှာ လုပ် မလုပ် မသိရတော့ပေမယ့် တချိန်က တနိုင်တပိုင်လုပ်သူတွေဟာ လိုင်စင်ခံ/အခွန်ဆောင်ပြီး အရိုးအစင်းဆုံး တွင်းလုံးတူးကြတာရှိခဲ့ပါတယ်။ လေးပင်တွင်းလို မျောတိုင် သစ်ခက်တွေ သုံးပြီးကာကွယ်မထားပဲ ရေတွင်း/အိမ်သာတွင်းတူးသလို တူးချသွားတာပါပဲ။ ဆင်းတဲ့တက်တဲ့အခါ ခြေနင်းစရာအခွက်ကလေးတွေလုပ်ထားတဲ့ တွင်းနံရံကို ဘယ်ညာ ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီး တက်ရဆင်းရယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် တွင်းဝ(အချင်း) သိပ်မကျယ်လှဘူး။
၄။ ပင့်ကူတောင် နဲ့ ဒေါ်နန်းကြည့်တောင် တွေရဲ့ကြည်လင် ပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရှိရင် တင်ပေးပါဦး။
(ယခငက် - ကျပ်ပြင် တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သူ)
Mogok Life Style
It Call Mogok